खुसिको खबर: सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दै अब केही समयमै आफ्नो पुरानो मुल्यमा पुग्ने ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुसिको खबर: सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दै अब केही समयमै आफ्नो पुरानो मुल्यमा पुग्ने !
खुसिको खबर: सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दै अब केही समयमै आफ्नो पुरानो मुल्यमा पुग्ने !
काठमाडौँ, २१ असोज । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्रबारको तुलानामा हिजो आइतबार प्रतितोला ९२ हजार ३ सय कायम भएको सुनको मूल्यमा अझै कमी आउने भएको छ । ‘एनआईसी, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छ«े र एनएमबी बैंकले मगाएको ३ सय किलो सुन आउँदो सातासम्म आउने भएको छ । त्यसपछिको २० दिनको लागि सुनको सहज आपूर्ति भई मूल्य केही घट्नेछ’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने ।
त्योअनुसार एसोसिएसनले अघिल्लो साता उल्लेखित बैंकहरूलाई २० दिनको लागि सुन आयात गर्न दिन राष्ट्र बैंकसँग सिफारिस गरेको छ । त्यो सुन आएपछि वैशाखभरको माग धान्नेछ । तर, जेठमा फेरि सुनको अभाव हुने र मूल्य पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
पिडित गायिकाले भनिन्, ‘म त पललाई माया गर्थें, हतकडी लाएर जेल पुगेको दृश्य देख्नै सकिनँ’
करिश्मा मानन्धर कक्षा १२ उत्तिर्ण कति जिपिए ल्याए ?